Ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada | Fitsangatsanganana tanteraka
La fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada Izy io dia iray amin'ireo toetra miavaka sy miavaka indrindra amin'ny fiarahamonina eto amin'ity firenena ity. Tsy zava-poana tamin'ny faran'ny taompolo taonan'ny taona 70 ity firenena ity dia naka ny sainan'i kolontsaina marolafy, lasa iray amin'ireo fanjakana nanandratra indrindra ny Fifindrà-monina.
Io fahasamihafana io dia vokatry ny fomba amam-panao ara-pivavahana samy hafa sy ny fitaomana ara-kolontsaina izay, amin'ny maha firenena mpifindra monina hatramin'ny nahaterahany, dia namolavola ny famantarana kanadiana.
1 Vazimba teratany Kanada
2 Ny fanahy roa any Canada: anglisy sy frantsay
3 Fifindra-monina sy fahasamihafana ara-kolotsaina
4 Fiderana sy fitsikerana
5 Ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada amin'ny isa
Vazimba teratany Kanada
ny vazimba teratany Canada, fantatra amin'ny anarana hoe "ny firenena voalohany" dia misy foko mihoatra ny 600 izay miteny amin'ny fiteny 60. Ny lalàna lalàm-panorenana tamin'ny 1982 dia manasokajy ireo olona ireo ho vondrona lehibe telo: Karana, Inuit ary Métis.
Ny Vazimba Teratany Kanadiana ("Firenena Voalohany") dia manodidina ny 5% amin'ny isan'ny mponina ao amin'ny firenena ankehitriny.
Tombanana ho 1.500.000 5 XNUMX ny isan'ireo mponina zanatany ireo, izany hoe eo amin'ny XNUMX% amin'ny totalin'ny firenena. Ny antsasany mahery amin'izy ireo dia miaina anaty vondrom-piarahamonina ambanivohitra na tahiry fitahirizana.
Ny fanahy roa any Canada: anglisy sy frantsay
Efa tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ny faritany izay ampahany amin'i Canada ankehitriny dia notsidihina ary nanjanaka anglisy sy frantsay, fa ny faritra misy ny fitaoman-dry zareo dia nozaraina. Ny fisian'i Eoropa amin'ireo tany ireo dia nitombo nandritra ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny alàlan'ny onja mpifindra monina.
Taorian'ny nahazoany fahaleovan-tena tamin'ny 1867, ny governemanta kanadiana tany am-boalohany dia namolavola politika manohitra ny vazimba teratany izay nofaritana taty aoriana "Ethnocide." Vokatr'izany dia nihena be ny lanjan'ny mponina ao amin'ireo tanàna ireo.
Any Quebec (Kanada miteny frantsay) dia misy fihetseham-po matanjaka
Saika hatramin'ny antsasaky ny taonjato lasa izay, ny ankamaroan'ny mponina Kanadiana dia an'ny iray amin'ireo vondrona lehibe roa eropeana: frantsay (mifantoka amin'ny jeografika any amin'ny faritanin'i Québec) ary anglisy. Ireo fototra ara-kolontsaina ao amin'ny firenena dia mifototra amin'ireo zom-pirenena roa ireo.
Manodidina ny 60% ny Kanadiana no manana ny Anglisy ho tenin-drazany, raha ny frantsay kosa ho an'ny 25%.
Fifindra-monina sy fahasamihafana ara-kolotsaina
Nanomboka tamin'ny taona 60, novaina ny lalàna mifehy ny fifindra-monina sy ny fameperana izay manohana ny fifindra-monina avy any Eropa sy Etazonia. Izany dia niteraka tondra-dranon'ny mpifindra monina avy any Afrika, Azia ary faritra Karaiba.
Ny tahan'ny fifindra-monina any Canada amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo avo indrindra eto an-tany. Manazava izany ny fahasalamana ara-toekarem-piainany (izay mitaky fitakiana ho an'ny olona avy amin'ny firenena mahantra) sy ny politikam-pirenen'ny fianakaviany. Etsy ankilany, Kanada koa dia iray amin'ireo fanjakana tandrefana izay mandray mpitsoa-ponenana betsaka indrindra.
Tamin'ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2016, mahatratra 34 ny foko isan-karazany hita ao amin'ny firenena. Amin'izy ireo, am-polony mahery ny olona iray tapitrisa. Ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada angamba no lehibe indrindra amin'ny planeta iray manontolo.
Ny satan'i Canada amin'ny maha firenena misy kolontsaina marobe dia voaporofo tamin'ny 1998 niaraka tamin'ny Lalàna momba ny kolontsaina maro any Canada. Io lalàna io dia mitaky ny governemanta kanadiana mba hiantohana fa ny olom-pireneny rehetra dia karakarain'ny fanjakana mitovy, izay tsy maintsy manaja sy mankalaza ny fahasamihafana. Ankoatry ny zavatra hafa, ity lalàna ity dia manaiky ny zon'ny vazimba teratany ary miaro ny fitoviana sy ny zon'ny olona na inona na inona foko, volon-dra, razambe, fiaviana na foko, fivavahana na fivavahana.
Isaky ny 27 jona dia mankalaza ny Andro kolontsaina marolafy.
Fiderana sy fitsikerana
Ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada ankehitriny dia mariky ny famantarana an'ity firenena ity. Dinihina ohatra tsara indrindra amin'ny fiarahamonina samihafa, mandefitra ary misokatra. Ny fandraisana sy ny fampidirana ireo izay tonga teto amin'ny firenena saika ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia zava-bita izay ankamamiana tokoa ivelan'ny sisintaniny.
Na izany aza, ny fanoloran-tena tapa-kevitra ataon'ny governemanta kanadianina nifandimby tamin'ny kolontsaina marolafy koa dia nampijaly mafy hevitra. Ny mahery setra indrindra dia avy amin'ny sehatra sasany amin'ny fiarahamonina kanadiana mihitsy, indrindra ny faritra Québec.
Ny mozika mozika any Canada
Ny mpitsikera dia manamafy fa ny kolontsaina marolafy dia mampiroborobo ny famoronana geutos ary mamporisika ny mpikambana amin'ny foko isan-karazany mba hijery anatiny sy hanamafy ny fahasamihafana misy eo amin'ny vondrona fa tsy hanantitrantitra ny zony sy ny mombamomba azy ireo amin'ny maha olom-pirenena kanadiana azy.
Ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada amin'ny isa
Ny antontan'isa navoakan'ny governemanta kanadiana matetika dia taratry ny fahasamihafan'ny kolontsaina ao amin'ny firenena. Ireto ny sasany amin'ireo manan-danja indrindra:
Mponina Canada (38 tapitrisa In 2021) Avy amin'ny Foko:
Teratany Amerikanina 4,9%
Amerikanina latina 1,3%
Fiteny tenenina any Canada:
Anglisy 56% (fiteny ofisialy)
22% frantsay (fiteny ofisialy)
Fivavahana any Canada:
Kristianisma 67,2% (Katolika ny antsasaky ny Kristiana kanadiana ary ny ampahadimy dia protestanta)
Fivavahana jiosy 1.0%
Ny hafa 0,6%
Manodidina ny 24% ny Kanadiana no mamaritra ny tenany ho tsy mino an’Andriamanitra na milaza fa tsy mpanaraka fivavahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada